Musika wepasi rose wakangwara musika kukura kusvika $ 137.9 bhiriyoni mumakore anotevera mashanu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Musika wepasi rose wakangwara musika kukura kusvika $ 137.9 bhiriyoni mumakore anotevera mashanu
Ziyoni Sika Kutsvagisa yakaburitsa mushumo mutsva wekutsvaga wakanzi "Smart Musika Musika - NeChigadzirwa (Smart Kicheni, Chengetedzo & Kuwana Kudzora, Mwenje Kudzora, Kumba Hutano, HVAC Kudzora, Uye Vamwe): Global Indasitiri Pfungwa, Kuongorora Kwakakwana Uye Forecast, 2020- 2026 ”. Sekureva kweshumo, hukuru hwemusika wemusika hunotarisirwa kusvika USD 137.9 bhiriyoni ne2026 kubva kuUS $ 85.6 bhiriyoni mu2021, paCAGR ye10.4% panguva yekufungidzira.
Ziyoni Sika Kutsvagisa yakaburitsa mushumo mutsva wekutsvaga wakanzi "Smart Musika Musika - NeChigadzirwa (Smart Kicheni, Chengetedzo & Kuwana Kudzora, Mwenje Kudzora, Kumba Hutano, HVAC Kudzora, Uye Vamwe): Global Indasitiri Pfungwa, Kuongorora Kwakakwana Uye Forecast, 2020- 2026 ”. Sekureva kweshumo, iyo musika wepamusha we smart saizi inotarisirwa kusvika kuUS $ 137.9 bhiriyoni ne2026 kubva kuUS $ 85.6 bhiriyoni mu2021, kuCAGR ye10.4% panguva yekufungidzira.
Sekuongorora kweZion Market Research, hukuru hukuru hwekusimudzira musika wepamusha unosanganisira kuwedzera kwekuziva pakati pevashandisi nezvekushandisa kwesimba, kuwedzera mari inowanikwa munyika dzichiri kusimukira, kuwedzera huwandu hwevanhu vakwegura, uye zvirongwa zvehurumende pakati pevamwe. Kunze kweizvi, kuwedzera kudiwa kwehutano hwepamba kuri kupa simba kuvandudza musika wepamusha wepamusha. Kune rimwe divi, marefu ekuchinjisa michina macircuit nemitengo yakakwira yakamisikidzwa neyakaganhurirwa mushandisi kudiwa ndiwo matambudziko epamusoro kudzora musika wepamusha wemba kubva pakuchinja kuenda padanho rekutora vazhinji kubva padanho rekutanga-rekurera.
Zvakangodaro, chigadzirwa chitsva chinotangwa nevatambi vemusika chiri kuwedzera kukwikwidza nekudaro kuchisimudzira kuvandudzwa kwemusika wepamusha wepamusha. Semuenzaniso, muna Nyamavhuvhu 2018, Philips Hue akazivisa akati wandei emagetsi mwenje anotyaira kusimudzira kwemusika wepasirose wemusika musika.
Segmentation ye smart home musika inoitwa zvichienderana nedunhu uye chigadzirwa. Izvo zvigadzirwa zvezvikamu mumusika wepamusha wemusha ndezvekuchengetedza hutano kumba, smart kicheni, HVAC kutonga, mwenje kudzora, nevamwe. Chiedza chekudzora chakatora mugove muhombe mumusika wevashandi vepamusha nekuda kwekudzikisa kushandiswa kwemagetsi mudzimba. Magetsi ekuvhenekesa anodzora kusimba kwechiedza chakagadzirwa sekuyera kwechiedza chechisikigo, nekudaro kudzikisira kushandiswa kwesimba nekusimudzira musika wepamba.
North America yakatora mugove mukurusa wemusika wepamusha wepamusha nekuda kwekuwedzera kwevanhu uye kukwira mukuda kwehutano hwepamba. Europe ndiyo imwe inotungamira musika wepamusha wemusika sezvo ichidzingirira North America. Zvirongwa zvehurumende muNorth America zvine masimba ekudzora magetsi metres, gasi, nemvura, kuti zviende nyore nyore mugiridhi rakangwara. Simba & kuchengetedza mari, kukwegura kwevanhu, kurerukirwa, chengetedzo, zvirongwa zvehurumende, uye kudzikiswa kwemhepo kabhoni ndiwo makuru ekukurudzira ari kufambisa smart musika wekuvandudza misika mumakore anotevera. Asia Pacific yakarongwa zvakare kuratidza kusimudzira kunoshamisa mumusika wepamusha wemba mumakore anotevera.
Makambani akatanhamara mumusika wekuchenjera wepamusha ndi Siemens AG, Legrand, Ingersoll-Rand plc, Johnson Controls Inc., Acuity Brands, Inc., Schneider Electric SE, United Technologies Corporation, ABB Ltd., Nest Labs, Inc., Samsung Electronics Co, Ltd., Crestron Electronics, uye Honeywell International Inc. pakati pevamwe. Vatambi ava vanonzi vanowedzera musika wepamba wakangwara wepasi rose.